7 Siyaabood oo AI u Kacaan u Suuqgeynta Emailka | Martech Zone
7 Siyaabood oo AI u kacaan u suuq geynta Emailka
Khamiis, May 28, 2020 Khamiis, May 28, 2020 Douglas Karr
Toddobaad ama ka hor, waxaan la wadaagay sida Iibiyaha Einstein wuxuu si aad ah u bedelay safarka macaamiisha, saadaalinta iyo bixinta isgaarsiinta shakhsi ahaaneed ee kor u qaadaya saameynta iyo yareynta qulqulka macaamiisha Salesforce iyo Suuqgeynta Suuqgeynta.
Haddii aadan eegin kanaga haynta liiska macaamiisha waayadan dambe, waxaad layaabi kartaa inta macaamiishoodu ay kuusoo baxayaan si joogto ah. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo halkaa yaal oo loogu talagalay alaabooyin waaweyn, sidaa darteed macaamiisha kuma eka inay ku ekaadaan waxyaabaha macaan Dufcaddii iyo qarax imaylka joornaalada mar dambe. Waxay filayaan in farriin kasta oo sanduuqa ku jirta ay ahaato mid khuseysa, waqtigeeda, iyo mid qiimo leh… haddii kale way baxayaan.
Si aad uhesho, waqtiga, iyo qiimaha… waa inaad kala saartaa, kala shaandheysaa, shakhsiyeeysaa, aadna hagaajisaa gudbinta emaylkaaga. Taasi waa wax aan macquul aheyn iyadoon la helin aaladaha saxda ah… laakiin nasiib wanaag caqliga macmalka ah wuxuu dardar galinayaa awooda suuqleyda si ay u horumariyaan nolosha, ololaha neefsashada ee sii wadaya in ay naftooda ku xoojiyaan barashada mashiinka.
Tani waxay u suurtagelinaysaa suuqleyda inay u soo diraan farriimo xawaare ku socda macaamiishoodu ay ku qanacsan yihiin, iyada oo ay ku jiraan waxyaabaha la shaqsiyeeyay iyo kuwa ku mashquulsan labadaba.
Kacaankii AI ee Suuqgeynta Emailka
30% shirkadaha adduunka oo dhan waxay u isticmaali doonaan AI ugu yaraan mid ka mid ah geeddi-socodka iibka ee sannadka 2020. 2035, AI waxaa laga filayaa inay waddo $ 14 tiriliyan oo dakhli dheeri ah iyo 38% oo kor u kaca faa'iidada!
Xaqiiqdii, 61% ee suuqgeeyayaasha emailka ayaa sheeganaya in AI uu yahay midka ugu muhiimsan ee istiraatiijiyadooda xogta soo socota. Waa kuwan 7 qaab oo sirdoonka macmalka ahi u saameynayaan suuqgeynta iimaylka si ka wanaagsan.
Qeybinta iyo Kordhinta shaqsiyeed - Dhibcaha saadaalinta iyo xulashada dhagaystayaasha ayaa adeegsada algorithms si loo qiimeeyo habdhaqanka mustaqbalka ee macaamiisha isla markaana loo saxo waxyaabaha la soo bandhigayo iyaga waqtiga dhabta ah.
Khadka Khadka Mawduuca - AI waxay fududeyn kartaa abuurista khadadka maaddooyinka oo ay u badan tahay inay la midoobaan akhristaha, iyaga oo u duubaya inay furaan emaylka. Tani waxay baabi'ineysaa hubin la'aanta tijaabada iyo qaladka markay tahay sameynta qadka maadada soo jiidashada leh.
Dib-u-habeyn Email - In kasta oo macaamiisha qaar ay ka jawaabi karaan iimaylka aad ka tegtay ee isla markii la soo diray ka dib la diro, kuwa kalena laga yaabaa inaanay diyaar u ahayn inay iibsadaan muddo toddobaad ah. AI waxay kala saartaa macaamiishan waxayna kaa caawineysaa inaad u dirto emaylkaaga dib-u-soo-celinta waqtiga ugu habboon, taas oo si weyn u yareyneysa heerka ka-tagga gawaarida
Iskudhinta Waqtiga dirista otomaatiga ah (STO) - Iyada oo gacan laga helayo AI, magacyadu ugu dambeyntii waxay ku guuleysan karaan saddex-geesoodka suuq-geynta - iyagoo gaarsiiya fariinta saxda ah waqtiga saxda ah qofka saxda ah. E-maylka aad u badan ee xayeysiintu miyaanay ahayn wax laga xumaado? AI waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo qiyaasi lahaa waqtiga dirista iyadoo la falanqeynayo howlaha macaamiisha, taas oo muujineysa waqtiga ay doorbidayaan.
Qalabaynta AI - AI kaliya ma aha otomatiga. Waxay u socotaa tallaabo hore si loo caawiyo dirista emayllo otomaatig ah oo khuseeya iyada oo la tixgelinayo macaamilkii macaamilkii hore ee la xiriira astaanta iyo iibsashada.
Ka Hufan Kana Fududeynaya Kanaalka - Falanqaynta caadooyinka macaamiisha, dookhiisa, iyo dhaqamadi hore iyo kuwa la saadaaliyay, AI waxay ka caawineysaa in la go'aamiyo inay sifiican ula jaan qaadayaan emayl, ogeysiis riix ah, ama kanaal kale. Kadib waxay u dirtaa farriinta kanaalka ku habboon.
Tijaabinta otomaatiga ah - Tijaabinta A / B, oo horay u ahayd geedi socod laba-cabbir ah ayaa hadda loo gudbiyay moodal bartilmaameed sare oo omnichannel ah. Waxaad tijaabin kartaa dhowr doorsoomeyaal ku jira xinjir iyo iskudhafyo kala duwan. Nidaamyo badan ayaa diraa muunad qaadista, waxay gaaraan natiijo tirakoob ahaan ansax ah, ka dibna waxay u diraan macaamiisha hadhay nuqulka la hagaajiyay.
Waa kuwan faahfaahinta buuxda oo leh sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab kasta oo AI ay u beddelayso suuqgeynta iimaylka.
Tags: aiqalabayntaotomaatiga ah u soo dir waqtiga hagaajintahagaajinta kanaalkaganacsiga daruur einsteinshaqsiyeynshakhsi ahaaneedqaybinta
Sida Loogu Hormariyo Qiimaha Beddelka Mobilada Wallet Dijital ah